Cadar cadarka ragga oo gabdhaha ugu jecel yihiin | Ragga Stylish
La udgoon aan bixinno sidoo kale waa hab lagu khiyaaneeyo qof, taas oo waqti ka dib sidoo kale noqota calaamad qeexaysa cidda aan nahay, shakhsiyaddayada. Sababtaas awgeed, waa lagama maarmaan in si sax ah loo doorto cadarkeenna, iyadoo la isku dayayo in la helo midka ku habboon labadaba dhadhankeena shaqsiyeed iyo habka aan u jirno.
Dareenkan, markaad dooranaysid cadarka, Sidoo kale waa inaan kaqeyb galno shucuurta aan rabno inaan soo gudbino, oo aan doorano barafuunno ay ka kooban yihiin diirimaad diiran ama cusub. Hoos waxaad ka heli kartaa tusaalooyin ka mid ah cadarrada ugu dareenka badan ee maanta suuqa laga heli karo.
1 Midka Ragga
4 Le Lab
6 Biyo Giò
Este Cadarka Dolce & Gabbana se lagu gartaa xarrago, sidaa darteed isticmaalkeeda ayaa lagula taliyaa habeenkii ama dhacdooyinka gaarka ah. Iyada oo leh dabeecad bari ah, halabuurka alwaaxa oo ay sameysay badanaa qoraallada basil, koryander iyo bambeelmo, waxay siin doontaa nin kasta dabeecad casri ah oo casri ah, iyada oo aan luminayn hawada caadiga ah ee isaga qeexaysa.
Udgoonkan, lagu gartaa ahaansho sameeyey by caraf udgoon, waxaa si gaar ah loogu talinayaa raggaas helay dheelitirka gudaha. Udugga Dior ee Fahrenheit wuxuu isku daraa jilicsanaan iyo xoog isla waqti isku mid ah. Waxyaabaha ay ka kooban tahay, dareenkan, waxay ka kooban yihiin bergamot iyo liin qoraalo ka duwan ubaxyada jilicsan ee hawthorn iyo lavender. Ku habboon munaasabad kasta, cadarkan sidoo kale wuxuu leeyahay qoraalo ah beeswax iyo ubaxyo casaan ah oo ka dhigaya cadar diirran.
Cadarkan Paco Rabanne waa gaar ahaan qoryo iyo midhoba, sababo laxiriira qoraaladeeda mandarin iyo reexaanta, oo lagu dhameystiray qorfe, ubax, kuul iyo maqaar. 1 Milyan waa, dareenkan, waa cadar loogu talagay nin isku kalsoon oo raba inuu isku dhex milmo ur kale habeenkii ama xilliyada gaarka ah.
Le Male waa udgoon ka duwan kuwa kale xarrago iyo gaar ahaaneed. Iyada oo leh shakhsiyad adag, cadarkan guriga Jean Paul Gaultier ayaa kaa dhigi doona nin u gaar ah xaalad kasta, ha ahaato dhacdooyinka gaarka ah iyo maalinba maalinta ka dambaysa. Lab ayaa noqday loogu talagalay nin shaqsiyad leh yaa garanaya wuxuu rabo.
Caddarka Aventus ee Creed waxaa loogu talagalay nin lab ah oo leh shakhsiyad daandaansi iyo rajo wanaagsan leh. Waxyaabaha ay ka kooban tahay oo isku dhafan ayaa leh qoraalo sare oo ah bergamot, currant madow, tufaax iyo cananaaska, oo sameeya carafta ayaa socota saacado badan. Waxaa dhiirigeliyay nolosha Napoleon Bonaparte, Aventus wuxuu doonayaa inuu u dabaaldego nolosha, guusha iyo geesinimada.
Kala soocida gudaheeda cadarka ragga sidoo kale wuxuu muujinayaa udgoonka Acqua di Giò ee Armani, oo loogu talagalay in lagu xoojiyo xoreynta naftaada iyo uga faa'iideyso shakhsiyaddaada si buuxda. Sidan oo kale, halabuurkeeda cusub wuxuu gudbiyaa xorriyadda iyo xoogga, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon bilaha gu'ga iyo xagaaga. Waxay ka kooban tahay qoraalo dusha sare ah oo liin dhanaan ah iyo liin macaan, bergamot, yasmin, liin, liin, liin dhanaan iyo neroli, Barafuunka Acqua di Giò waa mid ku habboon nin aan ka cabsanayn inuu naftiisa ahaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Goobo » Cadar cadarka ragga oo gabdhuhu aad u jecelyihiin